Archive du 20200821
Fanovana Governemanta Fanilihana ny Pr Ahmad no tena tanjona…
Rehefa tena dinihina dia fanilihana ny Pr Ahmad Ahmad no tena tanjona tamin’ny fikitihina ny governemanta omaly.
Raharaha Anosipatrana Nolavin’ny fitsarana ny fangatahan’ny MBS
Niakatra teny anivon’ny fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana omaly ny raharaha mampifanolana ny Kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny orinasan-tserasera MBS.
Rajoelina sy Ravalomanana 13 taona nifanandrinana
Tato anatin’ny 13 taona, dia mbola mijanona eo amin’i Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina sy ny mpomba azy avy aloha amin’ny ankampobeny ny raharaha politika eto Madagasikara.
Guy Rivo Randrianarisoa “Poizina ny manenji-dresy”
Poizina ngeza indrindra eo amin'ny fiainana dia ny manenjin-dresy, hoy ny depiote teo aloha, Guy Rivo Randrianarisoa. Aza manenji-dresy fa voasarika any foana ny sainao dia tsy mifantoka intsony mijery ny tanjona aleha ny maso ary tsy miasa 100% intsony koa ny vatana.
Fiarahamonim-pirenena Manahy ny faharavan’ny fitokisam-bahoaka
Nampahatsiahy tamin’ny alalan’ny fanambarana niraisan’izy ireo omaly ny avy eo anivon’ny firaisa-monim-pirenena fa tsy nitsahatra nitaky ny mangarahara hatramin’ny niandohan’ny fitantanana izao ahamehana ara-pahasalamana izao.
Jean Nirina Rafanomezantsoa Nankasitraka ny fanoloana ireo ministra roa
Efa ela Rafanomezantsoa Jean Nirina, tale jeneralin’ny Mpitsabo Malagasy FITRAMA no niandrandra ny tokony hanoloana ireo ministra roa mpikambana ao anatin’ny governemanta Ntsay Christian.
Trafikana zava-mahadomelina Rongony 350 kg no tratra teny Vinany
Lehilahy miisa roa no voasambotry ny Sampan-draharahan’ny Polisim-pirenena miady amin’ny zava-mahadomelina (STUP) ny alarobia 19 aogositra teo teny Ampitatafika noho ny fitaomana rongony.
Malagasy 111 avy any tany Inde Nahiboka amina toerana 3 samihafa
Nigadona omaly maraina teny amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ny fiaramanidina an’ny Air Madagascar nitondra ireo Malagasy tavela tany Inde nody an-tanindrazana.
Savorovoro maneran-tany Miroso ny fametrahana ilay rafitra vaovao ?
Manao randra tarihana eran` izao tontolo izao ny savorovoro amin` ny fanjakana. Raha ny eto amin` ny kaontinanta afrikanina ohatra dia niafara tamin` ny fanonganam-panjakana ny tany Mali.
Vohemar Mifandimby tonga ireo minisitra
Ho avy any amin’ny Faritra SAVA ny minisitry ny indostria, ny varotra ary ny asa tanana Rakotomalala Lantosoa anio,
Champions league 2021 Hiatrika fifanintsanana dingana faharoa ry Abel Anicet
Tafita any amin'ny dingana faharoa amin'ny lalao hiakarana amin'ny UEFA Champions League ny ekipan'ny PFK Ludogorets, ekipa Bolgara misy ny kapitenin’ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra,
Tsy maty manota
Isan’ny nanamarika ny andro omaly ny fanovana mpikambana teo anivon’ny governemanta, izay nandrasana hatry ny ela.
Dr Sahondrarimalala Michelle Hitsabo ny Fanabeazam-pirenena ?
Lasa vehivevy, misolo vehivavy. Vehivavy telo izao no nifandimby nitantana ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena hatramin’ny niakaran’i Andry Rajoelina teo amin’ny fitondrana.
Fitiliana sy fitsaboana ny tazomoka Nanolotra fitaovana an-tapitrisany ny Amerikana
Nanolotra kojakojam-pitsaboana mitentina 1,8 tapitrisa dolara ho an’ny
Famokarana zava-pisotro Miverina manodina milina ny STAR
Miverina amin’ny ara-dalana ny asa famokarana eo anivon’ny orinasa famokarana zava-pisotro STAR ao Antsirabe rehefa nitsahatra tao anatin’ny iray volana. Niara-nitsidika ity ozinina manan-tantara ity tany an-toerana ny minisitry ny Indostria, ny
Loholona Olga Ramalason “Aza potehina ny orinasa Malagasy”
Tsy misy fanajana ny fifanarahana ny fanakatonan’ny fanjakana ny Orinasa Tiko AAA, hoy ny Loholona Ramalason Olga omaly.
Fitantanam-bolam-panjakana Efa-bolana aty aoriana vao voasolo ny DGCF sy ny DCP
Ny volana aprily no nanesorana ireo Tale jeneraly miisa roa, izay tena toerana saropady na koa sokajiana ao anatin’ilay hoe « poste clé” teo anivon’ny
Fampianarana teknika sy fanofanana arak’asa “Tanora 1 000 000 no tokony ho voafohafana”
Tokony hisy tanora ho voahofana 1 tapitrisa ao anatin’ny 3 taona, hoy ny toromariky ny Filoham-pirenena Rajoelina ho an’ny Minisitry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak’asa Atoa Ernest Tsikeliankina. Ara-panabeazana 4 200 000 eo ny ambaratonga voalohany, ary rehefa tonga any amin’ny kilasy 3ème, dia 300 000 eo sisa.
Ambatobe Tsy nampihontsona ilay mpanendaka ny daroka
Vehivavy iray avy naka vola teo amin’ny BFV Ambatobe no nendahan'ny tovolahy iray tsy lavitra teo omaly.
Isotry Zaza tsy ampy taona roa tratra nanendaka
Eo anatrehan’ny firongatry ny asa fanendahana sy ny sinto- mahery eny amin’ny tetezan’i Bekiraro,
Kaominina Antananarivo Renivohitra Mpiasa 155 tsy nahazo karama 8 volana
Mpiasa misahana ny lafiny fanangonan-ketra na “regisseurs auxiliaires” miisa 155 miasa eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra na ny CUA no mitaraina amin’izao fotoana izao, fa tsy nandray karama nandritra ny 8 volana, araka ny fanambaran’izy ireo omaly.
Traboina eny 67 ha Fianakaviana 161 tsy mahita aleha
Fianakaviana 161 tamin’ireo miisa 500 traboina vokatry ny haintrano nitranga tetsy Andohatapenaka ny volana Jona lasa teo no tsy mahita aleha.
Antananarivo Renivohitra Hisy lalana hitondra ny anaran’Andriamanjato sy Razanamasy
Hiatrika fivoriana tsy ara-potoana ny filankevitra monisipalin’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra.
Coronavirus Nisy 4 maty indray, 938 ireo tsaboina
Olona 4 indray no lavon’ny coronavirus teto Madagasikara, nampiakatra ny isan’ny maty hatramin’izay ho 177, araka ny tatitry ny Pr Vololontiana Hanta omaly.